Night shift job information [Genvers] အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအလုပ်
Night Shift Words ဖြင့်အလုပ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များ
Night shift အလုပ်များ
အခြေအနေ setting ⇒ [ညဆိုင်း]
ညဆိုင်းအပါအ ၀ င်
Daito Co. , Ltd.
[Tobi / earthwork] ● ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အလုပ်များသောအချိန်ဇယားများကြောင့်ဝင်ငွေမြင့်မားခြင်း●တည်ငြိမ်။ ၀ င်ငွေမြင့်မားခြင်း● Tobi (Kei) ၁၅၀,၀၀၀ - (မပြီးသေးပါ) ၁၂၅၀,၀၀၀ - ●မြေကြီးလုပ်ငန်း (မသေး) ၁၁၀,၀၀၀ - [ညအလုပ်အတွက်ရရှိနိုင် (၁၅၀,၀၀၀ ~)] [အိပ်ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု] [မာစတာတစ်ယောက်ကြိုဆို]
# အဆောက်အ ဦး များနှင့်ကွန်ဒိုမီနီယံအဆောက်အအုံများအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်နေရာအသစ်တစ်ခုတွင်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင်အိမ်သုံးပစ္စည်းများအားလုံးပါ ၀ င်သည့်သီးသန့်အခန်းတစ်ခန်းရှိသည်။ ကုန်ကျစရိတ်များကိုရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးလည်းရှိပါသည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုအီးမေးလ်ဖြင့် ရွေးချယ်၍ ဂျပန်နိုင်ငံရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုယုံကြည်စိတ်ချစွာလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။၎င်းသည်အုပ်စုများနှင့်မိတ်ဆွေများလျှောက်ထားနိုင်သောအလုပ်ခွင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများလည်းတက်ကြွစွာပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ●နေ့စဉ်လစာကအနက်ရောင်စွန်အတွက်ယန်း ၁၄၀၀၀ နဲ့မြေကြီးလုပ်ငန်းအတွက်ယန်း ၁၀၀၀၀ မှစတင်သည်။ညအလုပ်မှာယန်း ၁၁၀၀၀ မှ စတင်၍ နှစ်ကြိမ်အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ●ပြီးပြည့်စုံသောလူမှုဖူလုံရေး (တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုရှိနိုင်သည်)!နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုအိုကေ!တိုတောင်းသောသက်တမ်းအိုကေ! ●ကျွန်ုပ်တို့ဟာမာစတာ / မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလည်းရှာဖွေနေပါတယ်။
obi Tobi အလုပ်② Earthwork ③အဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ပြိုင်တည်းစုဆောင်းမှု
obi Tobi ●နေ့စဉ်လစာ၊ ယန်း ၁၅၀၀၀ ကနေ ၂၀၀၀၀ ယန်းထက်မက * Tobi အလုပ်သင် / ယန်း ၁၂,၅၀၀ မှစတင်ပြီး●လစဉ်လစာ / ယန်း ၃၇၅၀၀၀ မှယန်း ၅၀၀၀၀၀ (+ အမျိုးမျိုးသောစရိတ်) ...
● Edogawa ရပ်ကွက်၊ ကန်တိုဒေသရှိ site တစ်ခုစီ၊ တိုကျိုရပ်ကွက် ၂၃ ခု၊ Chiba စီရင်စု၊ Saitama စီရင်စု၊
Daito Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
[မြို့ပြလုပ်ငန်း] အလုပ်မရှိပါ။၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ရယ်မောခြင်းဖြင့်တောက်ပသောမြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ [မေးခွန်းများ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ၊ အဆင်ပြေပါသည်။ပထမ ဦး စွာကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆိုရန်အခမဲ့ခံစားရ! ]
◆ကျွန်ုပ်တို့သည်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ကိုင်သည်။ဟုတ်ပါတယ်, အတွေ့အကြုံကလူကြိုဆိုကြသည်! [[[နေ့စဉ်လစာ ၁၃၀၀၀ ယန်း]]] အစတွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောဝင်ငွေမြင့်မားသည်။ * သာမန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိပါကအတွေ့အကြုံရှိသောအတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့်အတွေ့အကြုံနည်းသူများ (နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၃၀၀၀ ယန်း) ကိုစတင်နိုင်သည်။သင်ဟာလုံးဝအတွေ့အကြုံမရှိဘူး၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိရင်တောင်မှသင်ဟာငွေအမြောက်အများရနိုင်ပြီး [တစ်နေ့လျှင်ယန်း ၁၂၀၀၀] ဘယ်အချိန်မဆိုသင့်ရဲ့လစာကိုတိုးနိုင်မှာပါ။ it ၎င်းကိုအလွန်အကျွံမသုံးပါနှင့်။ငါ့ကိုယ်ဟာငါ့ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်လို့နွေရာသီမှာငါကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ငါ (ဒါကြောင့်ငါ overdo လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ) (^^) the ရာသီပေါ် မူတည်၍ mowing ကဲ့သို့သောအလုပ်များလည်းပါဝင်သည်၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ငန်းသည်ချောမွေ့ပြီးတည်ငြိမ်မှုကိုခံစားနိုင်သည်။ inqu ↓↓↓↓↓မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုသာကြိုဆိုပါ၏။ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆိုရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
အထွေထွေမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာအလုပ် / အလုပ်ဝန်ထမ်းများ
experienced အတွေ့အကြုံရှိပြီးအတွေ့အကြုံမရှိသောနေ့စဉ်လုပ်ခလစာ (ကင်းလွတ်ခွင့်) ... ၁၃၀၀၀ ယန်းမှစတင်ပါ။သင်ကအတွေ့အကြုံနည်းသော်လည်း (လွတ်ကင်းခွင့်မရှိပါ) ... 13,000 yen စတင်! * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုပညာရှိအဖြစ်အကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ ...
Jogawaracho, Akishima City, တိုကျို
of တိုကျို၏ဆင်ခြေဖုံးရှိနေရာတစ်ခုစီ၊ အဓိကအားဖြင့်တိုကျို၏တာမာဒေသတွင်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ Akishima ရှိသိုလှောင်ရာနေရာတွင်စုဝေးမည်၊ ကားကိုကားဖြင့်သွားမည်၊ Akishima သို့ပြန်သွားမည်။
<ယခုမှစ။ , မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများပူဖြစ်လိမ့်မည်! 2020 ၂၀၂၀ တွင်အနည်းငယ်ပို။ပြင်းထန်သောအပူကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက် Sawada ဆောက်လုပ်ရေးသည်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသောတောင်သူများကိုပင်ပညာရှင်များဖြစ်လာရန်လေ့ကျင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ငယ်ရွယ်သောလက်မှုပညာသည်များစွာရှိပြီးနေ့တိုင်းသည်တောက်ပ။ ပျော်စရာကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်ရွှင်လန်းမှုနှင့်လေးနက်မှုကိုသင်တို့၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်မကျေနပ်စရာကောင်းသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရန်မလိုသနည်း။အရည်အချင်းပြည့်မှီသောဝယ်ယူမှုအထောက်အပံ့လည်းရှိပါသည်၊ ထို့ကြောင့်အတွေ့အကြုံမရှိသော (သို့) အရည်အချင်းမရှိသောသူများထံမှအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါသည်။၎င်းသည်အားလပ်ရက်ဖြစ်သောကြောင့်သင့်မိသားစုနှင့်သင့်အချိန်ကိုလုံခြုံစွာထားနိုင်သည်။ ★“ စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်” ကို ဦး စွာထားပါ။ ★★ဒေသခံfromရိယာများမှလျှောက်လွှာများစုဆောင်းခြင်း★
Ushiku City, Ibaraki စီရင်စု
[Earthwork / gas ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်း] အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုလည်းကြိုဆိုပါသည်။နေ့ဘက်နှင့်ညပြောင်းမှုနှစ်ခုလုံးကိုသင်ရနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောဆိုဒ်များကို [နေ့ဆိုင်းနေရာများနှင့်ညဆိုင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှစ်ခုလုံး] ကိုချက်ချင်းလက်ခံပါမည်။ [ငွေပေးချေမှုအိုကေ! ] [နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုအိုကေ! ] [အဆောင်နှင့်အတူပြည့်စုံ / အစားအစာများနှင့်! ]
<အတွေ့အကြုံမရှိသောလူများကိုကြိုဆိုပါတယ်> ဓာတ်ငွေ့ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ
နေ့စဉ်ပြောင်းကုန်ပြီ / နေ့စဉ်လုပ်အားခ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ ညဆိုင်း / နေ့လုပ်ခ ၁၃၀၀၀ ယန်း ~ * ဓာတ်ငွေ့ဆောက်လုပ်ရေးအရည်အချင်းပြည့်မှီသူ / နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၅၀၀၀ ယန်း ~
[ရုံး] 3-30-15 Nishibaya, Ota-ku, Tokyo ထိုနေရာသည်အဓိကအားဖြင့်တိုကျိုရပ်ကွက် ၂၃ ခုတွင်ဖြစ်သည်။
Kiyokawa Gumi Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
[အကျိုးစီးပွားအမှတ်များ] ၀ င်ငွေမြင့်မားခြင်းနှင့် to ည့်ဝတ်ကျေပွန်ခြင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်း reward အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိသော ၀ န်ထမ်းများတက်ကြွစွာပါ ၀ င်ကြသည်။အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦး စားပေးကုသမှုပေးသည်
[အချိန်ကာလအလိုက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်] ●တစ်ပတ်လျှင်သုံးရက်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ပုဂ္ဂလိကဘဝကိုကြွယ်ဝစေခြင်း●လူတိုင်းသက်သောင့်သက်သာနှင့်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည်။၎င်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်လုပ်ရက်အရေအတွက်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံရန်စနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ပတ်လျှင်သုံးရက်မှအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးသင်အလုပ်လုပ်သောရက်အရေအတွက်ကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ကျွန်ုပ်သည်မိသားစု ၀ န်ဆောင်မှုကိုလိုလားသည်” နှင့်“ ကျွန်ုပ်သည်သီးသန့်အချိန်လိုသည်” စသည့်တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ # သင်အချိန်ပြည့်အလုပ်သွားလျှင်သင်ဝင်ငွေအများကြီးရနိုင်သည်။ # ၀ င်ငွေပိုလိုချင်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းလက်ခံပါတယ်။အတွေ့အကြုံရှိပြီးအတွေ့အကြုံမရှိသူနှစ် ဦး စလုံးသည်အလုပ်သင်မှစတင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ရုံဖြင့်လစာ ၃၀၀,၀၀၀ နီးပါးကိုအာမခံနိုင်သည်။အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးပြည့်စုံသောလူတစ် ဦး အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရနိုင်ပါကပိုမိုမြင့်မားသောလစာများကိုပင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။အတွေ့အကြုံရှိသောလက်မှုပညာရှင်များကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်ကိုပြည့်စုံသောလူတစ်ယောက်ဟုမခေါ်မီကြာမြင့်စွာနေမည်မဟုတ်။
[ကုမ္ပဏီ] (၁) လက်သမားလက်သမားခုန် (၂) အလုပ်သင် (၃) ပေါ့ပါးသောအလုပ်သမား (အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော OK!)
နေ့စဉ်လစာ ၁၃၀၀၀ ယန်း ~ ၂၀၀၀၀ ယန်း [လစာဥပမာ] အတွေ့အကြုံရှိသူ ၃ နှစ်အထက်ယန်း ၁၄၀၀၀ ~ ယန်း ၂၀၀၀ အတွေ့အကြုံ ၃ နှစ်မပြည့်သောယန်း ၁၃၀၀၀ ယန်း ~ အလုပ်သမား ၁၆၀၀၀ ယန်း ~ အသက်အတွေ့အကြုံ ...
ဒေသခံ Fussa City (JR Ome Line ရှိ "Fussa" ဘူတာမှ ၅ မိနစ်လမ်းလျှောက်ခြင်း) တိုကျို၊ Saitama, Kanagawa, Chiba နှင့်အခြားအနီးအနားရှိစီရင်စုနယ်မြေများ
Hikichigumi Co. , Ltd.
[အကြီးစားစက်ယန္တရားစစ်ဆင်ရေး၊ Tobi, မြေလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးမန်နေဂျာ] အတွေ့အကြုံမရှိသောလူတစ်ယောက် OK!အဆောင် / သိုက်ပုရွက်ဆိတ်မှာအပြည့်အဝထောက်ခံမှု!
အတွေ့အကြုံမရှိသောလူတစ်ယောက် OKအဆောင်မှာအပြည့်အဝထောက်ခံမှုနှင့်သိုက်ပုရွက်ဆိတ်တွေ! [hosp ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုကြောင့် ၀ န်ထမ်းများစွာခေါ်ယူခြင်း] ●အကြီးစားပစ္စည်းအော်ပရေတာ၊ တိုဘီ၊ မြေငလျင်…နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၁၀၀၀ နှင့်အထက်●ဆောက်လုပ်ရေးမန်နေဂျာ (ပုံမှန်ဝန်ထမ်း) …လစဉ်လစာ ၂၂၀,၀၀၀ မှ ၃၅၀,၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်များ
အကြီးစားစက်ကိရိယာလည်ပတ်မှု၊ 鳶၊ မြေလုပ်ငန်း၊ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးမန်နေဂျာ
③②③နေ့စဉ်လစာ ၁၁၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို more ④လစဉ်လစာ ၂၂၀,၀၀၀ မှ ၃၅၀,၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်မက * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ * အမျိုးမျိုးသောအခြားစရိတ်ရှိပါတယ်။
■ Chiba စီရင်စုနှင့်တိုကျို / Saitama / Kanagawa / Ibaraki ဆိုဒ်များ
Hikichigumi Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
သင်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်မည်။ “ မင်းမှာပြproblemsနာတစ်ခုခုရှိရင်ငါတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ” ကျေးဇူးပြုပြီးသင်၏အလုပ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်အပ်နှံနိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုကတိပေးသည်။ သင်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပါကအကျိုးရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။အနာဂတ်ကာလ၌၊ သင်သည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို ၀ င်ရောက်လိုပါကလူမှုရေးအာမခံကိုထုတ်ယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းလူမှုအာမခံကိုထုတ်ယူပါမည်။
☆★ hard ကြိုးစားအားထုတ်မှု၌မကောင်းသောသူများနှင့်အတွေ့အကြုံမပြည့်စုံသောအလယ်အလတ်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုလည်းကြိုဆိုကြသည်။ ☆★☆★☆★၎င်းသည်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသူများနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုပြောင်းလဲသောသူများဖြစ်သည်။ စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သည်★☆★ - ----- အလုပ်အကိုင် ---------- large စက်ရုံများနှင့်အများသုံးစက်ရုံများရှိစက်ပစ္စည်းများနှင့်စက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း / ထိန်းသိမ်းခြင်း (ပြုပြင်ခြင်း / စစ်ဆေးခြင်း) [စက်ရုံဌာန] ◆ဘူတာ အဆောက်အအုံ << အိမ်ခြံစည်းရိုး >> တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (ထိန်းသိမ်းခြင်း / စစ်ဆေးခြင်း) [မီးရထားဌာနခွဲ] ၎င်းသည်အဓိကကုမ္ပဏီ၊ အများပြည်သူပိုင်စက်ရုံအစရှိသဖြင့်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ပမာဏများစွာပေါကြွယ် ၀ သည်။ လုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေရှိသည်။ !! လူတွေကတာဝန်ယူမှုရှိရှိလိုက်နာလိမ့်မယ်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအတွေ့အကြုံရှိသောလူများသည်ချက်ချင်းတက်ကြွစွာပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်ရန်အတူတကွကြိုးစားလုပ်ဆောင်မည့်သင်၏ Yaruki သည်အရာအားလုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကုသမှုရှုထောင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်သည်။မင်းရဲ့ဘဝကိုမင်းတို့ကျောထောက်နောက်ခံပေးပါလိမ့်မယ်။
Esplan Tech Co, Ltdအလုပ်များကြည့်ပါ
လှုံ့ဆော်မှုပေါ် မူတည်၍ ၀ င်ငွေမြင့်မားသည်။ သင်နားလည်နိုင်သောကုသမှုမြင့်မားသည်။ [၁၉ နှစ် / လစဉ်ဝင်ငွေယန်း ၃၇၀,၀၀၀] သည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ထိပ်တန်းအဆင့်မြင့်ကုသမှု!အားလပ်ရက်တွေ၊ အချိန်ပိုအလုပ်တွေ၊ အိမ်ရာတွေ၊ ခရီးအထွက်တွေ၊ ညဆိုင်းစရိတ်စတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတွေအများကြီးရှိတယ်။
Tobi, ငြမ်း, မြေယာ, အထွေထွေအလုပ်
(၁) လက်ထောက် / အလုပ်သင်ပုံမှန် ၀ န်ထမ်း (၁) နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ (၂) Tobi ပုံမှန်ဝန်ထမ်း (၂) နေ့စဉ်လစာ ၁၅၀၀၀ ယန်း ~ ၂၀၀၀၀ ယန်း★အားလပ်ရက်နှင့်ညများတွင်နေ့စဉ်လစာ ၃၅% ...
Kawaguchi City, Toda City, Soka City, Saitama City, Saitama Prefecture၊ တိုကျို၊ Chiba စခန်း ၂၃ ခု၊
●၎င်းသည်တိုကျိုမြို့ရှိအများဆိုင်လုပ်ငန်းများအတွက်အဓိကအားဖြင့်၎င်းသည်အလုပ်များစွာရှိပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။သင်ဟာအတွေ့အကြုံမရှိသေးရင်တောင်နေ့စဉ်လစာ ၁၃၀၀၀ ယန်းနဲ့ခိုင်မာသော ၀ င်ငွေကိုရနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်, အတွေ့အကြုံရှိလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဗဟုသုတနဲ့စွမ်းရည်တွေအရကောင်းကောင်းကုသနိုင်မှာပါ။
Hagiwara Shoji Co. , Ltd. အလုပ်များကြည့်ပါ